Dr. Taleb Rifai Baaq Deg Deg Ah Oo U Diray Wadamada Xubnaha Ka Ah UNWTO Oo Warqad Cusub Ugu Jawaabay Golaha Fulinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wtn » Dr. Taleb Rifai Baaq Deg Deg Ah Oo U Diray Wadamada Xubnaha Ka Ah UNWTO Oo Warqad Cusub Ugu Jawaabay Golaha Fulinta
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Xoghayihii hore ee UNWTO Dr. Taleb Rifai
Dr. Taleb Rifai, Xoghayihii hore ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO), ayaa maanta u jawaabay Madaxweynaha Golaha Fulinta ee UNWTO ee ku saabsan codka qarsoodiga ah ee soo socda si loo xaqiijiyo ama aan loo xaqiijin Xoghayaha Guud ee UNWTO hadda.
The Guddiga u doodista Shabakadda Dalxiiska Adduunka Hadda waxa uu daabacay warqad cusub oo furan Dr. Taleb Rifai, xoghayihii hore ee UNWTO.
Warqadan waxay jawaab u tahay warqadii shalay ee furan Dawladaha xubnaha ka ah waxaa u diraya Madaxweynaha Golaha Fulinta ee UNWTO oo ka socda Chile.
Warqaddu waxay ku boorinaysaa waddamada xubnaha ka ah UNWTO inay eegaan dhammaan doodaha kiiskan ku xusan warqaddiisa.
Akhri warqadda Dr.Rifai
Asxaabta sharafta lahow iyo asxaabta,
Waxaa farxad weyn ii ah in ugu dambayntii aan helo jawaabta warqaddii wadajirka ahayd ee aan ku saxeexay Francesco Frangialli, weli December 2020, ee ku saabsanaa wakhtiga doorashada UNWTO ee Xoghayaha Guud, waxaana uga mahadcelinayaa Madaxweynaha sharafta leh ee Golaha. Waxaa laga yaabaa inaad xasuusato in warqaddayada, aan u soo jeedinay Xoghaynta inay dib u eegto wakhtiga Janaayo 2021 ee 113 Golaha Fulinta ka dib isbeddelka taariikhaha FITUR ee Janaayo ilaa Maajo 2021.
Ma soo dhawayn karo oo ma qaddarin karo hadalka uu yidhi mudane. Guddoomiyaha Golaha in sharcinimada si adag loo ilaaliyo go'aannada 112 iyo 113 Golaha Fulinta. Xaqiijintiisu waa mid nasteexo leh, in kasta oo aynaan waligeen ka doodin sharcinimada labada go'aanno midkood: faallooyinkayada waxa laga sameeyay dhinaca ballaadhan ee hubinta caddaaladda geeddi-socodka oo dhan.
Aan dib u habeynno:
Bishii Sebtembar 2020 ee 112 Golaha Fulinta ee Tbilisi, Georgia, Golaha Fulinta ayaa go'aansaday in uu haysto 113th Kalfadhiga Spain ee Janaayo 2021, oo ku dhex jira qaabka FITUR, taariikhaha uu xaqiijinayo waddanka martida loo yahay 1.
Isla kulankaas, Goluhu waxa uu sidoo kale ku ansixiyey wakhtiga hawsha doorashada, iyada oo ay ku eegtahay muddada soo gudbinta murashaxiinta laba bilood oo ka bilaabmaysa taariikhda EC, oo ah 18-ka November, 2020, 2.
Hal bil ka dib shirkii 112 ee Golaha Fulinta, Oktoobar 2020, Spain waxay ku dhawaaqday in FITUR dib loo dhigay May 2021 duruufaha jira awgeed. War-saxaafadeedka, ka qaybgalka shirka guddiga qabanqaabada ee FITUR ee xoghayaha guud ee UNWTO Pololikashvili ayaa lagu aqoonsaday 3. Waxa laga xumaado, go'aanka golaha Qabo kalfadhiga 113 EC gudaha qaabka FITUR, taariikhaha la xaqiijinayo, lama raacin.
Ka dib kama dambaysta codsiyada bisha Noofambar, UNWTO waxay soo saartay Noofambar 23-keedii qoraal qoraal ah oo ku socda Xubnaha oo ku saabsan helitaanka laba waafaqsan Musharaxiinta 4. Waxaa wax laga xumaado ah, qodobkii lagu ansixiyay 112 EC in la ogeysiiyo Xubnaha ugu dambayn 15-ka Diseembar helay musharrixiinta ayaan u hoggaansamin. Intaa waxaa dheer, waxay u muuqataa in wax laga xumaado, ilaa lix musharax la diiday, sababtoo ah ma awoodin inay si buuxda u soo gudbiyaan wakhtiga kama dambaysta ah.
Waxay ahayd isla wakhtigaas, December 2020, in isaga iyo Francesco Frangialli, aanu u soo jeedinay beesha UNWTO inay dib u eegaan wakhtiga 113 Golaha Fulinta , sida wax laga xumaado ku dhacday.
113-ka golaha fulinta ayaa dhacay sidii hore loogu qorsheeyay January 18 iyo 19, 2021, iyadoo musharraxa beddelka ahi uu haysto waqti aad u yar marka la barbar dhigo kan hadda xilka haya si uu u sameeyo olole wax ku ool ah. Runtii, munaasibad bulsho oo ay soo qaban-qaabisay hay’adda UNWTO habeennimadii golaha, waxa ay sheegtay in musharraxaasi uu aad uga xumaaday in aanu ka soo qaybgelin mudaharaad uu ku muujinayo fursad la’aanta ololaha.
Saaxiibbada qaaliga ah, marna kuma doodin go'aanka Goluhu ma ahayn sharci. Sida uu dhawaan sheegay Francesco Frangialli. sharci kuma filna. Marka aad habka wax u marinayso, waxa aad noqon kartaa sharci iyo anshax xumo labadaba 7.
Goobaha tacliinta waxa la yidhaahdaa, haddii ardaygu ku dhaco, waa dhibka ardayga; laakiin haddii fasalka oo dhan uu ku guuldareysto, waxaa iska leh macalinka. Maxaa la dhihi karaa marka kama dambaysta codsiyada ay aad u gaaban tahay oo ilaa 6 musharax oo dibadda ah oo ka mid ah 7 ay ku dhici waayeen waqtigii loogu talagalay? Ama sababta xogtan ku saabsan musharaxiinta la diiday looga reebay Xubnaha, xitaa haddii uu Goluhu codsaday xog ku saabsan musharixiinta helay in la faafiyo?
Waxa la sheegayo markii musharaxa kaliya ee ka soo haray uu la kulmayo waqti aan macquul aheyn ololaha, intiisa badan ilaa xilliga kirismaska ​​iyo sanadka cusub ee maamullada dalxiisku xirmayeen sanadka?
Maxaa la dhihi karaa markii Xoghayaha Guud uu ka qeyb galay shirkii guddiga qabanqaabada ee FITUR ee bedelay taariikhaha Janaayo ilaa May oo aan qaadin wax tallaabo ah oo lagu hagaajinayo taariikhda Golaha gudaha qaabka FITUR sida uu Goluhu u igmaday?
Maxaa la sheegaa marka Xoghayaha Guud uu ka tago taariikhda Janaayo ee Golaha isagoo og inuu jebin doono Xeerarka Maaliyadda isagoo sidaas samaynaya?
Waxa la dhaho marka Sarkaalka Anshaxa uu muujiyo nafteeda 8 leh walaac iyo murugo sii kordhaya in dhaqamadii hore si lama filaan ah loo joojiyay Ka tagista qol ku filan oo mugdi ah iyo maamul aan sabab lahayn?
Warbixin wax ku ool ah, Unugga Kormeerka Wadajirka ah ee Qaramada Midoobay 9 ayaa uga digay Xubnaha doorashooyinka Madaxda Sare ee Hay'adaha marka musharax gudaha ah oo u tartamaya jagadaas uu ka qayb qaato: Musharixiinta gudaha ee u tartamaya jagada madaxa fulinta waxaa laga yaabaa inay si xun u isticmaalaan ama ku takri falaan shaqadooda iyo agabkooda (tusaale, xiriirada, safarka, xarumaha xafiisyada, shaqaalaha, iwm.) si ay ugu adeegaan ololahooda gaarka ah. Xaaladani kaliya ma noqon doonto mid anshax xumo ah balse waxa ay sidoo kale keeni doontaa fursado aan loo sineyn oo u dhaxeeya musharaxiinta gudaha iyo dibada waxaana laga yaabaa in ay keento kala qeybsanaan shaqaalaha.
Kormeerayaashu runtii aad bay uga walaacsanaayeen suurtogalnimadaas, waxay markii dambe raaciyeen: Dhaqanka noocaas ah, marka loo eego Kormeerayaasha, waa in mar walba loo arkaa sharci-darro iyo anshax-darro, oo la cambaareeyo. Haddii musharax gudaha ah ama musharrax dibadda ah oo guulaysta lagu eedeeyo dhaqamadan oo kale, waa in ay maraan baaritaan iyo hab anshax..
Iyadoo taas laga duulayo, 113-kii Golaha Fulinta waxay soo saareen talo ku saabsan doorashada Xoghayaha Guud, taas oo aad hortaada haysatid. Hadda waxaa la joogaa waqtigii aad ku arki lahayd dhammaan doodaha, iyo ra'yiga aad ka qabto musharraxa, inaad u codayso ama aad u diido. Xor ayaad u tahay in aad samayso si kastaba ha ahaatee habka codaynta waa in uu dammaanad qaado sirtaada: Mustaqbalka Ururku waxa uu ku jiraa gacmahaaga.
Salaan gaar ah oo diirran ayaan idin leeyahay dhammaantiin.
Xoghayaha Guud ee UNWTO
Lifaaqa CE/112/6 muujin 1. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_06_Procedure_SG_elections_2022-2025_rev1_En_0.pdf
Faqrada 5 CE/113/4. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf
Xeerka Maaliyadda 14.7: Ilaa 30ka Abriil sannad kasta, Xoghayaha Guud waa inuu u soo gudbiyaa golaha xisaab xidhka xisaab xidhka ee sannad maaliyadeedkii hore. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_English.pdf soo xigtay cutubyada 77 iyo 87 (qayb).
Birgit Trauer ayaa lagu dhajiyay Shabakada Dalxiiska Adduunka ee WhatsApp Group:
Baaqan hufnaanta iyo welwelka anshaxeed, aragtidayda,, waxay muujinaysaa ujeeddada ugu wanaagsan iyo ka go'naanta si loo xaqiijiyo ka mid noqoshada, caddaaladda, iyo waajibaadka akhlaaqda ee xoojinaya diiradda Qaramada Midoobay ee 2021 ee nabadda iyo kalsoonida. Mahadsanid Dr. Taleb Rifai.